Posted by ညီလင်းသစ် au 16.9.11
ကောင်းပါ့ဗျာ.. မျက်စိထဲ ဒီလင်ဆိုးမယားဆိုးပုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်အောင် ရေးထားတာပါပဲ..
မင်္ဂလာပါ ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ရေးတတ်ပါ့ဗျာ။ တာဝန်မဲ့မှုနဲ့ လက်လွတ်စပါယ်က လင်မယားတဲ့။ အနောနီးမတ်စ်ပြောသလိုပဲ ဒီလင်ဆိုးမယားမကောင်းပုံ(ဒီလင်ဆိုးမယားမကောင်းပုံ၊ ထူးခြားစေလို၍ နှစ်ခါရေးလိုက်သည်) မျက်စိထဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို မြင်ယောင်နေမိပါရဲ့။ ကျန်းမာပါစေ ဒကာတော် ညီလင်းသစ်ရေ။
ကိုညီလင်းရဲ့ ကဗျာလေး သဘောကျလိုက်တာ။
ဟုတ်တယ် ... တာဝန်မဲ့မှုနဲ့ လက်လွတ်စပယ်က ရှေ့သွားနောက်လိုက် ညီကြပါတယ်။
တာဝန်မဲ့သူက အ၀ီစိကိုသွားရင် လက်လွတ်စပယ်ကလဲ အ၀ီစိကိုလိုက်မှာပေါ့ ... ။
သူတို့ နောက်မဆုတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်တိုးကြပါစေ ... ရှေ့မှာက အ၀ီစိကို ဆင်းရမယ့် ချောက်ကမ္ဘားကြီး အသင့်ရှိနေတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ... အမြဲလာဖတ်နေပေမယ့် တစ်ခါမှတော့ ကွန်မန့်မရေးဖူးပါ။ အခုတော့ ဒီမော်ဒန်သရော်ကဗျာလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့5stars ပေးသွားပါကြောင်း။
ရသလိုတော့ ရေးကြည့်တာပဲ ညီမရေ..၊
တရားဝင် ပေါင်းသင်းနေတာနော်..၊ တရားဝင်..၊း)
တင်ပါ့..၊ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ ဘုရား..၊
အစစ်ပဲ၊ ရောင်နောက် ဆံထုံးပါမယ့် သူတွေဆိုတော့ ဖဝါးထပ်ချပ် မကွာတမ်း လိုက်မယ် ထင်တယ်..၊း)
ပထမဆုံး ပေးတဲ့ ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်၊ အမြဲလာဖတ်တာ သိရလို့လည်း ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ၊ အဆင်ပြေသလို ဝင်ထွက်ပါနော်..။
မရေးတတ်တော့ တဲ့တိုးဘဲ ပြောမိတယ်
ကိုညီလင်းသစ်ရေးတာဖတ်ပြီး တဟိဟိနဲ့ ပြုံးမိတယ်
ငါဘဲသိ ငါဘဲတတ် ဆိုပြီး အများပိုင်ကို သူ့အဖိုးပိုင်လို မာန်တက်နေတဲ့လူကြီးလေ..
ကြိုက်သွားပြီ အကိုရေ... ကဗျာလေးကို ပြောတာပါ။
မိုက်တယ် အကုန်လုံးကိုမရည်ရွယ်ဘဲ ထိသွားတယ်....။
အလွန်ကို ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီလှသော စုံတွဲပါပဲ။ အဲဒီလင်မယားကို သာသာနဲ့ နာနာလေးနှက်ထားတာလေး ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။း)
ဒီစုံတွဲနဲ့ ပရမ်းပတာတို့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သွားတာတော့ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်ပေပဲ။ သူတို့လက်ချက်ကြောင့် ရောဂါဆန်းတွေကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်ထင်ပါ့။
ကိုညီလင်းသစ် ရေးတတ်လိုက်တာ.. :D
တာဝန်မဲ့မှုနဲ့လက်လွတ်စပယ်တို့ခြံထဲက အပင်တွေကို ပေါင်းမသင်ရေမလောင်းပဲ ဂဏန်းတွေလို့ပဲ မြင်နေတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် နောက်မဆုတ်တဲ့ ဒင်းတို့ကို
အဆန်းတကာ့ အဆန်းဆုံးရောဂါ မျိုးစုံ ဖြစ်စေဖို့
ဆုမတောင်းချင်ပါဘဲနဲ့ တောင်းဆုတွေ တလှေကြီးချွေပြီး
ကိုညီလင်းသစ် လည်း ရောဂါဆန်း ရသူတဦးကိုး
ဒါနဲ့ တာဝန်မဲ့မှုနဲ့ လက်လွတ်စပယ် က ခဏပြန်လာပါအုန်းတဲ့ ဝေစု ဆင့် လေးဆယ် ပေးချင်လို့ တဲ့
Junior U Ponnya,
Take care of your "Yawgasan".
ကောင်းလိုက်တာဗျာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပဲ... အကုန်လုံးထိတယ် မိတယ် တကယ်တော်တယ်ဗျာ...
တာဝန်မဲ့မှုနဲ့ လက်လွတ်စပယ် တို့ဟာ နဖူးစာ ရွာလည်ပြီး လင်မယား ဖြစ်လာကြတယ် ဆိုတဲ့ အရေးအသားလေး သဘောကျသဗျာ...
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့အတွေးတွေ အရေးတွေကို အင်မတန်သဘောကျတာ။
မန့် ဘို့ ကလဲ အခွင့်အလမ်းမရလေ။
ခု ကွန်နတ်ရှင်ကြည်ဖြူတုန်း မန့် ကြည့်တာ။
ရကောင်းပါရဲ့ ။ ;)
ညီလိုက်တဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်... ဒီပို့စ်နဲ့အရေးအသားကို တော်တော်လေးနှစ်သက်မိတယ် ညီလင်းသစ်ရေ...
ိပတ်လည်လား ဒဲ့လား။ အဟဲ။ တာဝန်မဲ့မှုတွေ.... တာဝန်မဲ့မှုတွေ.... ဟင်းးးးး (သက်ပြင်းပဲချမိတယ်)
ကဗျာလေးက ရေလည် ဟတ်ထိတယ်...ကြိုက်၏..ခိုက်၏..
“ တာဝန်မဲ့မှုဟာ မာန်တက်တယ်၊
သူတို့လင်မယားက အမြဲဒီလို ... ”
ဒီအပိုဒ်လေးလဲ ရောက်ရော မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲရယ်လိုက်မိတယ်။ တကယ့်ကို မျက်မှောက်ကာလကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ဘရာဗိုပါရှင်...။
တကယ်ပဲ လိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲပဲ ။း))
ရေးထားတာတွေ ဒဲ့ ကြီးပဲ
ဖတ်ပြီး ငိုချင်သွားတယ်..ဆိုတာလေးရေးမလို့ Cbox က Posting failed. This Cbox is locked. Posting is disabled. တဲ့။